Wadahadaladii ugu danbeeyay ee Kismaayo oo Fashilmay iyo Wafdiga Dr Saacid u dhoofay Muqdisho. |
Wadahadaladii ugu danbeeyay ee Kismaayo oo Fashilmay iyo Wafdiga Dr Saacid u dhoofay Muqdisho.
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya shirarkii uga socday halkaasi Masuuliyiinta Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Maamulka KMG ah 24 saac ee ugu danbeeyay inay kusoo dhamaadeen natiijo la’aan.
Masuul ka tirsan Maamulka KMG ah oo ka gaabsaday in Magaciisa lasoo xigto ayaa sheegay goordhow in lagu kala kacay shirkii ugu danbeeyay ee ka socday Hotelka Tawakal ee Magaalada Kismayo, kadib markii Madaxda dowladda ay ku adkaysteen inaysan ka gudbi Karin qodobo Dastuuri ah oo meesha soo galay, maamulka KMG ahna ay muujin waayeen wax tanaasul ah.
Wasiirka arimaha gudaha iyo Amniga Qaranka Xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdikariin Xuseen Gulleed oo goordanbe oo xalay ah shir Jaraa’id Saxaafadda ugu qabtay hotel Tawakal ee Magaalada Kismaayo ayaa rajo xumo ka muujiyay sii socoshada wada hadalka labada dhinac kadib markii labada dhinac ay isku mari waayeen qodobadii ugu Muhimsanaa ee mesha la iskula soo qaaday.
War goordhow nasoo gaaray ayaa sheegaya Qayb kamid ah Wafdigii Raisul Wasaare Saacid ee ku sugnaa Magaalada Kismaayo in diyaarad lagu soo qaaday, waxaana sidoo kale Saacadaha soo socda la filayaa inta harsan ee Wafdigi Raisul Wasaaraha in ay ku laaban doonaan Magaalada Muqdisho.
Lama saadaalin Karin halka ay ku biyo shuban doonto xaalada Magaalada Kismaayo oo dad badan ay rajo ka qabeen in wada hadal lagu dhamayn doono wax walba, maadaama Wafdi balaaran oo ka socda dowladda uu ku suganyahay Magaalada Kismaayo.